I-HUAWEI Bukela i-3, eneHarmonyOS sisalathiso sewatchwatch | Iindaba zeGajethi
I-HUAWEI Bukela i-3, eneHarmonyOS yi-smartwatch yesalathiso
UMiguel Hernandez | | Izixhobo ezinokunxitywa, elektroniki, SmartWatch
Asizisanga iwotshi efanelekileyo kwiwebhusayithi yethu kangangexesha elithile, ke namhlanje lusuku oluhle lokukukhapha ngohlalutyo lwewatchwatch yamva nje kunye neyona intle kakhulu kwintengiso, iHuawei Watch 3, ethi izise okungaphezulu kunehardware kunye Uyilo oluphezulu, lukhatshwa yiHarmony OS 2.0, inkqubo yokusebenza ethi uHuawei afune ukungazinxibelelanisi noGoogle.
Ndiqinisekile ngokuqinisekileyo akunjalo, ke singene kolu hlaziyo.
Kuqala kwinto zonke kwaye phantse rhoqo, siyakukhumbuza ukuba sinalo uhlalutyo lwevidiyo olufumanekayo kwisitishi sethu YouTube, ke ungaphoswa lithuba lokurhuma kwaye ujonge olu phononongo phantse sisiqingatha seyure apho ungayi kuphoswa zinkcukacha.
Ukuba uyithandile, yithenge ngexabiso elifanelekileyo> ZITHENGA
1 Uyilo: Ipremiyamu engakumbi, ngakumbi iHuawei
2 Izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware, iHarmonyOS kukucofa ikhekhe
3 Iscreen kunye nokunxibelelana, akukho nto ilahlekileyo
4 Izinzwa kuyo yonke indawo kunye noqeqesho oluninzi
Uyilo: Ipremiyamu engakumbi, ngakumbi iHuawei
Isixhobo sinendlela esele siyile ngayo yoyilo olwahlukileyo koko kunikezelwa yiApple. I-smartwatch yeHuawei ibhetyebhetye ngokupheleleyo kwaye Inobukhulu obungu-46,2 x 46,2 x 12 millimeters othe wamangaliswa bubukhulu bayo obukhulu, into engaqhelekanga kolu hlobo lwewotshi. Oku kuyamangalisa, kodwa singatsho ukuba akusenzi "sigqithise" nokuba sikhulu.
Ungayithenga ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon
Ngokwenxalenye yayo, iwotshi ine-chassis yentsimbi emnyama ngokupheleleyo kuhlelo esiluvavanyileyo kunye nomtya we-silicone. Siyakhumbula ukuba iHuawei iyakuphinda ivelise ingxelo eyakhelwe ngokupheleleyo kwi-titanium, ngentambo efanayo kwaye sinokuthenga imitya eyahlukeneyo ngenkqubo yokuvalwa ngokulula kwiindawo eziqhelekileyo zentengiso. Ngokwesisindo, ziigram ezingama-52 kuphela, I-Huawei Watch 3 iyamangalisa ngokukhanya kwayo. Ulwakhiwo luhle kakhulu, luziva premium ngendlela efanayo nesiseko esenziwe ngento ecwebezelayo yeplastiki / ngezinto zeceramic. Ayithathi unyango oluninzi ukuqonda ukuba iyimveliso ephezulu.
Izixhobo zekhompyutha kunye nesoftware, iHarmonyOS kukucofa ikhekhe
Ukwenza imisebenzi yesiqhelo, inkampani yaseAsia ithathe isigqibo sokuseta iprosesa yayo, i-HiSilicon Hi6262, ke kule nguqulo ayizukuxhoma abaqhubekekisi ukusuka kuluhlu lweKirin, ezo zezo zixhobo ezifuna amandla aphezulu. Sine-2 GB ye-RAM Ukuhamba neprosesa nkqu 16 GB yokugcina zizonke izicelo kunye nomxholo ohambelana nokuviwayo.
Umsebenzi wokukhupha amanzi
Ukuchasana ukuya kuthi ga kwi-5 ATM
Inkqubo yokuSebenza yale jewel yesihlahla yile IHarmonyOS 2.0, isixhobo sokuqala seHuawei esinale nkqubo efikelela kuluntu ngokubanzi. Uvakalelo lwethu luqaqambile IHarmonyOS ihamba kakuhle kwaye khange sihlangabezane naziphi na izinto ezingasebenziyo-enyanisweni, ikhuphisana ngokuthe ngqo kukhuphiswano, ngamanqanaba esantya aphezulu kune-Wear OS kunye nezinye iindlela ze-Samsung. Inayo igalari yeApple yeHuawei yokuBukela, ngelishwa asifumananga sicelo sinomtsalane ngokwaneleyo ukuba sisebenzise lo msebenzi. Nangona kunjalo, usetyenziso olufakwe ngokwendalo lubonakale ngathi lwanele, Kunye nokudityaniswa kwayo kunye nesicelo seMpilo yeHuawei esincomela ukuba siyifake kwigalari yeApp.
Iscreen kunye nokunxibelelana, akukho nto ilahlekileyo
Sineqela eliphambili 1,43 intshi AMOLED ebonelela ngexabiso elipheleleyo 466 x 466 iipikseli, ngenxa yoko sinazo Iiphikseli ezingama-326 nge-intshi nganye. Unikezela ngezinga lesiselo esinxilisayo se I-60 Hz, engaphezulu ngokwaneleyo kwiscreen sokubukela esibukhali. Ikakhulu ibalaselisa into yokuba sinesona siphezulu Ukukhanya oku-1.000 XNUMX, Into ebonakala ngaphandle ngaphandle apho sinokuthi senze uninzi lwalo mandla ngenxa yokuba ukusetyenziswa kwawo emini iyonke kwaye kugcwele, ngaphandle kokubonakalisa okanye naluphi na uhlobo lwengxaki oluvela kuyo.
Ngokumalunga nokunxibelelana, sinonxibelelwano 4G nge-eSIM, okwangoku ehambelana kuphela neenguqulelo ze IMovistar kunye ne-O2, ukuphakamisa iingxaki ngeOrange, iVodafone kunye nezinye izinto ezivela kuzo. Sikwanayo NFC Nangona singenakho ukwenza iintlawulo kuba iHuawei isasebenza kwizivumelwano neendlela zokuhlawula. Ngaba I-Bluetooth 5.2 kunye ne-WiFi 802.11n kolunye unxibelelwano, into eya kusivumela ubunewunewu bokungaphosi nantoni na.
Izinzwa kuyo yonke indawo kunye noqeqesho oluninzi
Sinalo lonke eli nani likhulu leenzwa, ke siyathandabuza ukuba uyakwazi ukwenza nawuphi na umsebenzi le Huawei Watch 3 ingakwaziyo ukulinganisa:
Inzwa yokugcwalisa ioksijini yegazi
Okwangoku ithemometha inako ukulinganisa ubushushu besikhumba, kodwa ngenyanga kaJulayi siza kufumana uhlaziyo oluya kusivumela ukuba silinganise ubushushu bomzimba. I-barometer ichanekile kwaye kwenzeka okufanayo nakuzo zonke izivamvo zeHuawei Sele ibonakalisile ukusebenza kwayo kwiinguqulelo zangaphambili zeewotshi zayo ezifanelekileyo.
Ngokuphathelele kuqeqesho sineenguqulelo ezingaphezu kwe-100 ezahlukeneyo, eya kuthi isinike iziphumo ezinokuthenjwa kwisicelo seMpilo yeHuawei. Olu luhlobo olubukhali lwenkampani olunoluhlu olubanzi kakhulu lwamathuba malunga noku.
Ukuzimela kwesithembiso ngeentsuku kukusebenza kwazo zonke izinto ukuya kuthi ga kwiintsuku ezili-14 ukuba siye kwindlela yokonga umbane. Kuvavanyo lwethu sifumene iintsuku ezi-2 zokusebenzisa kakhulu kwaye malunga neentsuku ezili-12 ziya kusinika kwinqanaba lokonga amandla, U-Huawei usithembisa ukuba kuhlaziyo olulandelayo siya kufumana iziphumo ezithembiswe ngophawu.
Le Huawei Watch 3 ijongeka ngathi luvavanyo lokuqala lwe-litmus yeHarmonyOS kwaye okwangoku sele igqithile, ngokunyaniseka, amava omsebenzisi angaphezulu kwaleyo yeenguqulelo zangaphambili ze-Apple Watch kwaye ingaphezulu kwe-Wear OS. Ngaphandle kwamathandabuzo, iwotshi ye-369 euros (ene-FreeBuds 3 njengesipho) ehlala kwinqanaba eliphezulu kakhulu ibekwe njengenguqulelo ekrelekrele kakhulu kwindawo yam yokujonga i-Android.
Uyilo lweNkulumbuso kunye nezixhobo
IHarmonyOS ibonakalise amandla obutofotofo kunye nokuntywila
Akukho nto ilahlekileyo kwinqanaba lehardware
Igalari yeapp ifuna utyalomali ngakumbi
Ukuzimela akukabikho njengoko kwakuthenjisiwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » I-HUAWEI Bukela i-3, eneHarmonyOS yi-smartwatch yesalathiso
Umshini weRealme TechLife Robot, isicoci seerobhothi esinomgangatho ophezulu / ixabiso
Thatha i-Advantage kwezi zinto zintle ngeeMveliso ze-Oclean zoBugcisa beBrashi